Ny fanesorana ny fanadiovana fanadina nohazavaina amin'ny Semalt Expert
Azo antoka fa lasa olana goavana ny fitsaboana spam. Raha tsy mahazatra an'io teny io ianao, avelao aho hilaza aminao fa karazana fifamoivoizana amin'ny botsika izay mety hanimba ny toerana misy anao ao amin'ny valin'ny fikarohana . Ity fifamoivoizana sandoka ity dia natao hanatsarana ny laharan'ny tranonkala hackers, raha mbola mazoto izy ireo amin'ny fampidinana anao amin'ny aterineto. Ny taham-pitenenana dia avo be foana amin'ny spam referral, ary ny antontan'isa avy amin'ny tranonkala ao amin'ny Google Analytics dia tsy hita tsara araka izay tsy misy olona mitsidika ny tranokalanao fa bots.
Julia Vashneva, Tale Mpitarika Success Success of Semalt , dia mamelabelatra vahaolana vitsivitsy azo ampiharina amin'io lafiny io.
Nahoana no olana lehibe ny fanamarinana Spam?
Tsy mety ny milaza fa ny olana ara-pitenenana dia ny olana ara-pitenenana, ary manosika ny sain-tsainan'ny vohikalanao amin'ny angona tsy misy dikany. Fotoana fialan-tsasatra tokoa izany, ary tokony ho nandre momba ireo tranonkala izay mahantra ny aterineto. Tena manahiran-tsaina ny hanangana tranokala iray, hanatontosana ny fanamafisana ny milina fikarohana, ary mbola hahazoana toerana mahantra amin'ny valin'ny fikarohana.
Mora foana ny manaisotra spam referral, fa ny hany zavatra azonao atao dia mamorona filtre amin'ny Google Analytics..Amin'ny fananganana filtres any, afaka manampy ny adiresy IP ianao ary manala ireo mpitsikilo referenţa toy ny button-for-website. Izany rehetra izany dia hanatsara ny fizotry ny tranokalanao amin'ny farany. Mamoròna filiro marobe araka izay tratra mba hamonjena ny tranonkalanao tsy ho simba amin'ny aterineto. Noho ny fanampian'ny solosaina dia azonao atao ny manakana ny tranonkalan'ny fitsangatsanganana tsy hanimba ny tranokalanao ao amin'ny aterineto ary hanakana ny adiresy IP izay hitanao fa sahirana.
Mijanona ny famindrana spam
Raha mikasa ny hampitsahatra ny spam ianao, ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mamorona filtre. Raha toa ka tsy miasa ho anao izany, dia afaka mampiditra fehezanteny manokana ao amin'ny tahan'ny .htaccess ianao. Ireo fehezan-dalàna ireo dia omena ao amin'ny kaontinao Google Analytics, ary tsy maintsy manoratra ny tranokalanao ianao mba hahazoana ireo karazana fehezan-dalàna ireo.
Ny fandehan-draharaha fahatelo dia fandikana. Ny mpandidy dia mitarika ny fifamoivoizana any amin'ny loharano azony, ary afaka misoroka ny fahatongavan'ireo toetry ny kalitaony. Nanambara ireo manam-pahaizana fa azo antoka io fomba io satria mety hisakana ny fisian'ny botsaka sy viriosy ao amin'ny tranokalanao izany. Tsy maintsy mamorona sari-tany sasany ianao alohan'ny hanatanterahana an'io safidy io ao amin'ny kaontinao.
Wordpress dia manome ny mpampiasa azy amin'ny alàlan'ny plugins maro izay afaka misoroka ny fahatongavan'ny spam sy ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao. Ho an'ny tranonkala ratsy indrindra amin'ny webmaster dia ny iray amin'ireo tranonkala ratsy indrindra. Fomba handravana ny toerana misy azy ao amin'ny aterineto izany. Nefa ireo plugins blocker amin'izao fotoana izao dia mitaky fatratra ny tontolo eran-tany. Natao hita ao amin'ny WordPress izy ireo ary azo alamina sy miasa ao anatin'ny segondra. Tsy maintsy misafidy plugin azo antoka ianao ary alamino izany mba hanatsarana ny fahitana sy ny fahatokisana ny tranokalanao ao amin'ny Internet Source .